Nedzimwe nzira dzinobudirira dziri ruzivo muhurumende yehutupiti, vanokuvadza nevatambudzi vave vakatora kushandiswa kwavo kunotyisa kune imwe nzvimbo. Hackers vanopedza kombiyuta yekupedzisira vashandi purogiramu dzakadai sezvivako zvekudzivirira moto zvine chinangwa choga chekuwana ruzivo rwemashoko anonyanya kufanana nekapasswords nekodhi. Muzviitiko zvakawanda, vanotengesa vanotora zvizere zvevashandisi, pavanodzokorora vashandisi vekupedzisira kune nzvimbo yakaipa.
kukosha kwekuchengeteka kwepajw.org hakugoni kuiswa zvakakwana pazvinosvika pakudhinda kwema digital - luxury yacht charter miami beach. Kushandisa pop-ups uye kucheka kunoshandisa vashandisi vepa internet panzvimbo yekutengesa. Mazuva ano, vatengesi vari kunyanya kushandisa spam emails kutora mashoko kubva kombiyuta yako zvinyararire, pasina ruzivo rwako. Kushandisa spam emails uye kuvhara kunobvumira vanoshungurudza vane utsinye kuputsa moto wenyu uye mapurogiramu ezvidziviriro, vachikuita kuti uchengetedzwe kurwisa.
Kugamuchira email kubva kune kambani yekambani yakakurumbira hazvirevi kuti email ndeyechokwadi. Kushandura magwaro anogamuchirwa anopa simba kune vanotengesa kuwana mashoko anokosha kubva kumakombiyuta enyu, kunyanya mabhizimisi ezvo.
Ryan Johnson, Mutungamiri Mukuru Wekutsvaga Semalt , anotsanangura mazano, anoshandiswa nevashori kuti akuratidzei zvakavanzika zvako, uye nzira dzokudzivisa.
Kutumira software updates mishumo, inoteverwa nehutano kuisa mishumo iripo paIndaneti. Muchiitiko ichi, kubatana kunowanikwa kune ngozi dzinotyisa dzinoshandisa kombiyuta yenyu yekuchengetedza zvirongwa..
Kutumira pop-ups iyo inoreva kuti nhoroondo yako yepaIndaneti ichavharwa kunze kwekuti iwe uise zita rako rekushandisa nephasiwedi munguva chaiyo. Mune nguva refu, vatengesi vanowana ruzivo rwemashoko enyu ekutumira.
Kutumira magwaro anoratidza kuti nhoroondo yako yekambani yakashandurwa. Muchiitiko ichi, vatengesi vanokutumirai scam link iyo inokudzosera kune webhusaiti yakawanda paunenge uchiedza kuchinja mapepa ako epasipi.
Spam Vs. Zvikanganiso: Hints uye Chokwadi
Zvose zvinopesana nemashoko e spam zvinowanzova zvinoshungurudza. Izvo zvose zvisingadadi mharidzo iyo inoshungurudza vashandisi ve PC apo inoratidzwa pamapeji avo ekufuratira. Zvisinei, musiyano wakatarwa ndewekuti mharidzo ye spam haisi mungozi kumushandisi wepakombiyuta, kana yakaenzaniswa nemashoko ezvinyorwa zvakagadzirirwa kutora mashoko anokosha kubva pachigadzirwa chako.
Nzira yekuzvidzivirira sei kubva kune matambudziko
Kurinda paunotarisa uye uchishandisa webhusaiti yevanhu inonyanya kukosha kana zvasvika pakusachengetedzwa kwewebhu. Chengetedza webhusaiti yako kubva pakugadziriswa uchishandisa filtrami yaTrindbird yega-spam. Thunderbird nzira inoshandisa in-built-scam kuti ipe spam messages. Ichi chishandiso chinoratidza mharidzo yepamusoro peji rako kukunyeverai mushure mokucherechedza mhemberero yemashoko.
Mukuwedzera, shanduro yeTurnderbird inonyevera kombiyuta wekushandisa kombiyuta apo sangano rinoratidzika rinoratidzika kuti rinodzokorora mushandisi kune imwe nzvimbo yakaipa kunze kweiyo inoratidzwa. Kudzivisa kutarisa emaimeri kunze kwekunge kombiyuta yekupedzisira yekombiyuta iri nechokwadi chokuti mutumisi wacho ane mhaka inobatsira kuti arege kunyengedzwa. Kushandisa zvinyorwa zvekushandura nefishing filters zvakare kunobatsira kudzivirira vanonyangadza kuti vasapinda mumakombiyuta ako akanyarara.
Kuve nechokwadi pamusoro pemashoko ose e spam uye e-scam kunobatsira kudzivisa vatambudzi kubva pakuwana mazita evashandi emakosti uye mapepa. Ngwarira paunenge uchifambira mberi nekudzivisa kutarisa mifananidzo yezvinyorwa uye uchishandisa maitiro e-email akadai seTurnderbird application inodzivirira mabasa ehupenzi kubva pakuitika. Uyewo, chenjerera zvekutsvaga maitiro kuburikidza nekuongorora kana chibvumirano chakanaka musati wanyora.